Abanye abantu, ekufundeni kwabo ngokubuya kweNkosi uJesu, basekela izifundo zabo kuphela eziprofethweni zeBhayibheli, kodwa abafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu. Iyini inkinga ngokwenza kanjalo? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
58. Abanye abantu, ekufundeni kwabo ngokubuya kweNkosi uJesu, basekela izifundo zabo kuphela eziprofethweni zeBhayibheli, kodwa abafuni ukulalela izwi likaNkulu…
“Okokuqala, asingaqinisekisi zonke izinkulumo. Kunalokho, asibheke ukuthi uMoya oNgcwele usebenza kanjani. Asiqhathanise neqiniso ukuze sibone ukuthi indlela esiyihambayo iyahambisana yini nomsebenzi kaMoya oNgcwele, bese sisebenzisa umsebenzi kaMoya oNgcwele ukubheka ukuthi indlela enje ilungile yini. Okokuthi le nkulumo noma leya nkulumo seyenzekile yini, thina bantu asingangeneli. Kuhle kithina ukuthi, kunalokho sikhulume ngomsebenzi kaMoya oNgcwele nomsebenzi omusha uNkulunkulu awenzayo manje. IBhayibheli liqukethe amazwi kaNkulunkulu akhulunywa ngabaphrofethi namazwi abhalwe ngabantu uNkulunkulu abasebenzisa ngaleso sikhathi; nguNkulunkulu uqobo kuphela ongachaza lawo mazwi, futhi nguMoya oNgcwele kuphela ongenza incazelo yala mazwi yaziwe, futhi nguNkulunkulu kuphela ongaqaqa izimpawu eziyisikhombisa ukuze kuvuleke umqulu. Aniyena uNkulunkulu, nami angiyena, ngakho ngubani ongalinga ukuchaza ngokuthanda amazwi kaNkulunkulu? Ingabe ungalinga uwachaze la mazwi? Noma ngabe abaphrofethi oJeremiya, oJohane no-Eliya bebelapha, bebengeke balinge, ngoba abalona iWundlu. YiWundlu kuphela elingaqaqa izimpawu eziyisikhombisa bese livula umqulu, futhi akekho omunye ongachaza amazwi Akhe. …”
… Izinsuku zokugcina azikho ngaphezu kwezinsuku zokugcina futhi azikho ngaphezu kweNkathi Yombuso engameleli iNkathi Yomusa noma iNkathi Yomthetho. Izinsuku zokugcina ziyisikhathi lapho wonke umsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha wambulwe khona kinina. Lokhu ukwambulwa kwemfihlakalo. Akekho umuntu ongembula imfihlakalo enjalo. Noma kungathiwa umuntu uliqonda kangakanani iBhayibheli, kugcina kungamazwi nje kuphela, akukho ngaphezu kwalokho ngoba umuntu akayiqondi ingqikithi yeBhayibheli. Lapho umuntu efunda iBhayibheli, angase athole amaqiniso athile, achaze amazwi athile noma acubungule kakhulu emavesini adumile noma izingcaphuno, kodwa ngeke awukhiphe umqondo okulawo mazwi, ngoba konke umuntu akubonayo ngamazwi nje afile, hhayi izigcawu zomsebenzi kaJehova noJesu futhi umuntu akakwazi ukuxazulula imfihlakalo yomsebenzi onjalo. Ngakho-ke, imfihlakalo yohlelo lokusebenza lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yimfihlo enkulu kunazo zonke, efihlakele kakhulu futhi engacabangeki kumuntu. Akekho ongayiqonda ngokuqondile intando kaNkulunkulu ngaphandle uma Yena uqobo eyichaza futhi ephumela obala kumuntu, ngaphandle kwalokho, ziyohlale ziyimfumbe kumuntu zibe yimfihlo evalelwe unomphelo. Ungabanaki labo asenkolweni; uma beningatshelwanga namuhla beningeke nikwazi ukuqonda. Lo msebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha unemfihlakalo engaphezulu kwazo zonke iziphrofetho zabaphrofethi. Kuyimfihlakalo enkulu kakhulu kusukela ekudalweni, futhi akukho mphrofethi omdala osake wakwazi ukukuqonda, ngoba le mfihlakalo yembuleka kuphela esigabeni sokugcina futhi ayikaze yembulwe. Uma niyiqonda imfihlakalo futhi nikwazi ukuyamukela ngokugcwele, labo bantu abakholwayo bonke bayonqotshwa yile mfihlakalo. Yilokhu kuphela okungumbono omkhulu kunayo yonke, lowo umuntu alangazelela kakhulu ukuwuqonda kodwa futhi okuyiwo ongacacile kakhulu kuye.
AmaJuda angalesiya sikhathi onke afunda eTestamenteni Elidala futhi azi ngesiphrofetho sika-Isaya ukuthi ingane yomfana izozalelwa emkhombeni. Kungani pho, sebenalolu lwazi, baqhubeka bemshushisa uJesu? Ingabe lokhu akungenxa yesimo sabo sokuhlubuka sendalo nokungawazi umsebenzi woMoya oNgcwele? Ngaleso sikhathi, abaFarisi babekholelwa ukuthi umsebenzi kaJesu wawungafani nalokhu ababekwazi okwaphrofethwa ngengane yomfana; abantu banamuhla baphika uNkulunkulu ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu osenyameni awuhambisani neBhayibheli. Ingabe into eyenza ukuba bahlubuke uNkulunkulu ayiyona into eyodwa efanayo? Ningakwazi ukwamukela ngaphandle kwemibuzo wonke umsebenzi woMoya oNgcwele? Uma kungumsebenzi kaMoya oNgcwele, lokho kusho ukuthi “ngumthombo” ofanele. Kumele uwamukele ngaphandle kokungabaza, kunokuba ukhethe ofuna ukukwamukela. Uma uzuze ulwazi oluthile kuNkulunkulu waba nokungabaza Ngaye, ingabe lokhu akukona ukwenza okungafuneki? Okumele ukwenze ukwamukela, ngaphandle kokuthi kusekelwe yiBhayibheli, noma yimuphi umsebenzi inqobo uma kungoMoya oNgcwele, ngoba ukholelwa kuNkulunkulu ukuze ulandele uNkulunkulu, hhayi ukumphenya. Akumele nifune obunye ubufakazi obungubufakazi bokuthi nginguNkulunkulu wenu. Kunalokho, kumele nihlukanise ukuthi nginalo na usizo kini; ilokho okusemqoka. Yize senithole ubufakazi obungephikiswe eBhayibhelini, ngeke bunilethe ngokuphelele phambi Kwami. Yini eniphila emingceleni yeBhayibheli, hhayi phambi Kwami…. Yize iBhayibheli laphrofetha ukuthi ingane yomfana izozalwa, akekho owaqonda ukuthi isiphrofetho sizofezeka ngobani, ngoba umuntu ubengawazi umsebenzi kaNkulunkulu, yikho lokhu okwenza ukuba abaFarisi balwisane noJesu. Abanye bayazi ukuthi umsebenzi Wami owokusiza abantu, kodwa basaqhubeka nokukholelwa ukuthi uJesu Nami abantu ababili abahlukene abangasoze baqhathaniswa. Ngaleso sikhathi, uJesu wakhuluma kubafundi Bakhe kuphela ochungechungeni lwezintshumayelo eNkathini Yomusa, ezifana nokuthi bangenza kanjani, bangahlanganyela kanjani ndawonye, bangacela kanjani ngomkhuleko, bangabaphatha kanjani abanye, nokunye. Umsebenzi awenza wawungoweNkathi Yomusa, futhi wachaza kuphela ukuthi kumele abafundi nalabo abamlandelayo benze kanjani. Wenza umsebenzi weNkathi Yomusa kuphela akenzanga lutho okwezinsuku zokugcina. Ngenkathi uJehova ebeka imithetho yeTestamente Elidala eNkathini Yomthetho, kungani engenzanga nomsebenzi weNkathi Yomusa? Kungani engawenzanga wacaca ekuqaleni umsebenzi weNkathi Yomusa? Ingabe lokhu bekungeke kusize ekwamukeleni kwabantu? Waphrofetha ukuthi ingane yomfana izozalwa bese iyabusa, kodwa akazange akwenze singakafiki isikhathi umsebenzi weNkathi Yomusa. Umsebenzi kaNkulunkulu enkathini ngayinye unemingcele ecacile; wenza kuphela umsebenzi wenkathi yangaleso sikhathi futhi akawenzi umsebenzi wesigaba esilandelayo singakafiki isikhathi sawo. Yingale ndlela kuphela ezokwenza ukuba umsebenzi wesigaba ngasinye ulethwe phambili. UJesu wakhuluma kuphela ngezimpawu zezinsuku zokugcina, ngokuthi ubekezela kanjani nokuthi usindiswa kanjani, nokuthi uyophenduka kanjani uvume nezono, kanjalo nokuthi usithwala kanjani isiphambano ubekezelele ukuhlupheka; akaze akhulume ngokuthi abantu ezinsukwini zokugcina kumele bangene kanjani noma kumele bafune kanjani ukwanelisa intando kaNkulunkulu. Kanjalo, ngeke kube amanga ukubheka eBhayibhelini ukuze uthole umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina? Yini ongayihlukanisa ngokubamba iBhayibheli kuphela ezandleni zakho? Kungaba ngutolika weBhayibheli noma umshumayeli, ubani ongazi ngaphambili umsebenzi wanamuhla?
Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu wawungenzelwanga ukugcwalisa izibikezelo zabaprofethi basendulo futhi akezanga ukuzohlala emfundisweni noma ukubona izibikezelo zabaprofethi basendulo ngenhloso. Kodwa izenzo Zakhe azithikamezanga izibikezelo zabaprofethi basendulo, noma zithikazise umsebenzi awenza ngaphambilini. Iphuzu elisemqoka emsebenzini Wakhe bekuwukungalandeli nanoma iyiphi imfundiso, nokwenza umsebenzi lowo Yena Ngokwakhe obekufanele ukuthi awenze. Ubengesiye umprofethi noma isanusi kodwa umenzi owayezele ukwenza umsebenzi owayefanele ukuwenza, ezele nokuzovula inkathi Yakhe entsha enze nomsebenzi Wakhe omusha. Kusobala, ngenkathi uJesu ezele ukuzokwenza umsebenzi Wakhe, wabuye wagcwalisa amazwi amaningi akhulunywa abaprofethi basendulo eTestamenteni Elidala. Kanjalo-ke nomsebenzi wanamuhla ugcwalise izibikezelo zabaprofethi basendulo beTestamente Elidala. Wukuthi nje angiphakamisanga “leya alimanaki endala ephuzi,” yilokho nje. Ngoba mningi umsebenzi okufanele ngiwenze, kunamazwi amaningi okufanele ngiwakhulume kini, futhi lo msebenzi namazwi abaluleke kakhulu kunokuchaza iziqeshana ezivela eBhayibhelini, ngoba umsebenzi ofana nalowo awubalulekanga kakhulu nokuthi ube yigugu kuwena futhi awukwazi ukukusiza noma ukukuguqula. Ngihlose ukwenza umsebenzi omusha hhayi ngenxa yokugcwalisa isiqeshana esivela eBhayibhelini. Uma ngabe uNkulunkulu weza kuphela emhlabeni ukugcwalisa amazwi abaprofethi basendulo beBhayibheli, manje-ke ubani omkhulu, uNkulunkulu osesimweni somuntu noma labo baprofethi basendulo? Manje, ngabe abaprofethi abaphethe uNkulunkulu, noma uNkulunkulu ophethe abaprofethi? Uwachaza kanjani lawa mazwi?
kwesithi “Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Okwedlule：Kuyini ngempela ukuhlobana phakathi komsebenzi kaNkulunkulu kanye neBhayibheli? Ingabe umsebenzi kaNkulunkulu wafika kuqala noma iBhayibheli lafika kuqala?
Okulandelayo：Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukungaphambuki eBhayibhelini nokuthi ukuphambuka eBhayibhelini kusho ukukhaphela uNkulunkulu. Ingabe lolu hlobo lombono luqondile?